Khaladaadka 10-ka ah ee ugu sarreeya Marijuana iyo ganacsiyada CBD waxay ku sameeyaan hagaajinta mashiinka raadinta
10ka qalad ee ugu sarreeya marijuana ational
Ma hubineyso in goobta ay tahay mid saaxiibtinimo leh
Ku dhowaad boqolkiiba 75 dhammaan baarayaasha internetka waxaa lagu sameeyaa aaladaha mobilada. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay ganacsiyada leh cinwaan jireed sababtoo ah inta badan macaamiishan mustaqbalka waxay ku socdaan. Google waxay isbadalkan kubilaabtay sanadki 2014 markii ay ogaatay in raadinta mobilada ay qariyeen raadinta desktop markii ugu horeysay. Google dhab ahaan doonaa GALKA boggaaga haddii uusan ahayn mid saaxiibtinimo u socda. Waad tijaabin kartaa bartaada internetka hadda adoo adeegsanaya xiriirka saaxiibtinimo ee mobilada ee Google Halkan: https://search.google.com/test/mobile-friendly
Ma haysato liiska alaabada ee martigelinta websaydhkooda.
Inta badan goobaha lagu nasto ee Marijuana waxay leeyihiin menusyadooda martigelinta goobaha saddexaad sida Leafly ama Weed-Maps. Tani waa qalad weyn sababaha soo socda:
A. Mashiinnada raadinta ee Google waxay doorbidaan degello si joogto ah u cusbooneysiiya waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Inta badan barta la cusbooneysiiyaa marba marka ka dambaysa ayaa barta ay ku soo bandhigi doonaan guurguurayaasha Google.
B.Mawduucu waa King, websaydhka leh waxyaabo badan ayaa si joogto ah uga darajo sarreeya kuwa ka yar.
C. Adiga heerka cigta aad u sarreeyaa Heerka soo-kabashada waa erey SEO ah oo cabbiraya inta ay isticmaaleyaashu ku sii nagaanayaan boggaaga. Haddii aad marijuana ku isticmaasho Google oo ay kuu keento degel lagu iibiyo qaybaha baabuurta isla markiiba waxaad dib u riixdaa oo sii wad raadintaada. Google wuxuu u eegaa qiyaastan inay tahay calaamad muujinaysa in websaydhkaagu yahay spammy ama tayo hooseeya. Dadka hela macluumaadka ay rabaan waxay sii joogi doonaan goobta muddo dheer waana akhriyaan macluumaadka.
D. Haddii menu-gaagu uusan ku jirin macaamiishaada barta internetka ee raadinaya alaabooyin gaar ah waxay aadi doonaan kuwa kula tartamaya halkii. Waa tan tusaale,
Raadiyaha Isticmaalayaasha loogu talagalay Riyada Buluugga ah ee Tacoma waa tan natiijooyinka.
Ganacsiyada marijuana ee aan ku heysan liiskooda meertooda MARNA muuji baarayaashan maxalliga ah.
Ha sameynin cilmi baarista ereyga kahor intaadan dhisin goobta.
Haddii aadan sameynin baaritaanka ereyga muhiimka ah ee ah habka loo adeegsado aaladaha qaarkood si loo go'aamiyo ereyada muhiimka ah ee dadku raadinayaan inta badan waxaad heli doontaa taraafikada iyo iibka ka yar kuwa kula tartamaya. Hab fudud oo loo sameeyo cilmi-baarista ereyga aasaasiga ah waa in lagu qoro ereygaaga bartilmaameedka ah ee Google. The auto dhameystiran soo-jeedintu waa tilmaam fiican oo ku saabsan nooca ereyada ay macaamiishu adeegsanayaan si ay u helaan badeecadaada ama adeegyadaada. Haddii websaydhkaagu aanu ku jirin ereyadan muhiimka ah cinwaanka, sharaxaada Meta iyo jirka boggaaga waxaad ka maqantahay macaamiil badan.
Aan lahayn blog.
Balooggaagu wuxuu u adeegaa ujeedooyinka soo socda:
A. Waxay kudareysaa waxyaabo boggaaga. Waad ku dari kartaa dib u eegista alaabada, sheekooyinka, dhacdooyinka iyo inbadan.
B. Waxay ku haysaa boggaaga cusbooneysiin leh waxyaabo cusub oo ku siin doona qiimeyn sare.
C. Waxaad soo qaban doontaa ereyada muhiimka ah ee dabo dheer kuwaasoo ah boqolkiiba 75 dhammaan raadinta. Ereyga dabada gaaban ayaa noqon doona wax la mid ah "dawooyinka aniga agtayda ah" erayga dabo dheer ayaa noqon doona "Waa maxay qaybta ugu wanaagsan ee lagu mariyo marijuana-ga Seattle". Sidoo kale xusuusnow in boqolkiiba 25 raadinta maalintii ay yihiin kuwa Google aysan waligeed arag. Adoo kudaraya blog oo aad ku cusboonaysiinayso waxyaabo aad u fiican waxaad qabsan doontaa inbadan oo ka mid ah macaamiishan.
Vital X Daaweynta WIFI Gudaha / Bannaanka WIFI
199.99 iibka ah 119.00
Aan Fiirinaynin liiskaaga ganacsiga Google iyo Bogga Google-Plus.
Google wuxuu isku dayayaa inuu la tartamo baraha kale ee bulshada iyo dib u eegista sida Face book iyo Yelp. Adiga oo dhammeystiraya liiskaaga ganacsiga Google isla markaana kudareysa sawirro laxiriira Google waxay u dhowdahay inay si dhab ah uqaataan ganacsigaaga oo ay kuqortaan meel sare. Sidoo kale adoo cusbooneysiinaya boggagaaga Google oo lagu daray kuna dhiirrigelinaya macaamiishaadu inay raacaan boggaaga. Qoraalkaaga ayaa ka soo muuqan doona natiijooyinkooda raadinta isla markiiba.
Ku suuq geyn maayo You-tube
Google waa mashiinka raadinta ugu weyn adduunka, waxa dadka intiisa badan aysan garaneynin waa in You-Tube uu yahay kan labaad ee ugu weyn raadinta adduunka. Oo malee maxaa jira? Google ayaa iska leh adiga-Tube. Google wuxuu jecelyahay fiidiyowyada adiga-Tube-ka ah maxaa yeelay waxay iibin karaan xayeysiinta markasta oo dadka isticmaala ay daawadaan. Marka caqli gal ayey noqon laheyd inaad yeelato Channel You-tube ee ganacsigaaga iyo inaad si joogto ah ugu soo dirto fiidiyowyo keyword keyword la xiriira ganacsigaaga.
Ma ururinayo E-mayllada macaamiisha
Websaydhkaaga laga bilaabo maalinta koowaad waa inuu lahaadaa qayb ay macaamiisha uga tagi karaan magacooda iyo cinwaanka emaylka si ay ugu biiraan liiska diristaada. Markaa waxaad u adeegsan kartaa liistada dirista si aad ugu dhawaaqdo dhacdooyinka, qiimo dhimista iyo u tartamidda lacagta doollarka.
Looma baahna iibiyeyaasha inay ku xirmaan bartaada.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee Google u go'aamiso xoogga websaydhku waa inta bogag kale ee internetku tilmaamayaan inay kugu soo laabanayaan. Tan waxaa loo tiriyaa sida codka internetka in websaydhkaagu yahay ganacsi dhab ah oo uu ka kooban yahay waxyaabo fiican. Si kastaba ha noqotee dhammaan xiriidhadu ma aha kuwo siman; waxaad dooneysaa xiriiriyeyaal ka socda websaydha isku meherad ganacsi ah oo aad ku sugan tahay. Immisa ka mid ah shirkadaha wax iibiya ay leeyihiin degello? Iyaga oo dhami ha ku muujiyaan xiriiriye kaaga meeshaas. Tani way ku caawin doontaa LABADA ganacsiyada ayaa qiimeeya iibka sii kordhaya ee labadiinaba.
Inaanay shaqaaluhu ku lug yeelan waxyaabaha ku jira iyo saamiyada bulshada.
Immisa ka mid ah shaqaalahaaga ayaa leh Face-book, twitter ama Google? Ma waxay dhajinayaan oo ay la wadaagayaan boostadaada? Miyay uga tagayaan faallooyinka boggaaga? Miyay abuurayaan nuxur iyo qoraallo ku saabsan ganacsigaaga? Haddii aysan ahayn waa inay ahaadaan. Inta badan ee saamiyada bulsheed ee meheraddaadu ay sare u kaceyso websaydhkaagu wuu darajayn doonaa. Guushoodu waxay kuxirantahay guushaada.
Akhriso hageheena 8 siyaabood oo shaqaale ah ayaa gacan uga geysan kara hagaajinta mashiinka raadintaada.
Kama jawaabayo dib u eegistaada Google.
Sida laga soo xigtay sahan ay sameeyeen Brightlocal 88% macaamiisha waxay ku kalsoon yihiin dib u eegista khadka tooska ah sida talo shaqsiyeed-taas oo ah wax la yaab leh markaad fiiriso xaqiiqda ah in dib u eegista ay dhajiyaan dad aysan aqoon. Isla sahan ay sameysay Brightlocal; go'aamisay in kaliya 12% dadweynaha aysan si joogto ah u aqrinin dib u eegista adeegyada ganacsiga ama alaabada. Inta badan milkiileyaasha ganacsatadu xitaa ma oga inay ka jawaabi karaan dib u eegisyadooda taasina waa faa iidadaada haddii aad si sax ah u isticmaasho. Google waxay ku dhiirrigelineysaa milkiileyaasha ganacsiyada inay ka jawaabaan dib u eegista wanaagsan iyo xitaa ka sii muhiimsan ee dib u eegista xun. Tani waxay muujineysaa Google iyo Macaamilka inaad daryeesho sumcaddaada internetka. Google sidoo kale waxay tan u eegeysaa inay calaamad u tahay in meheraddaadu ay sharci tahay oo ay kugu sarreyn doonto adiga.
Halkan u aad si aad u baratid sida looga jawaabo dib u eegistaada Google. https://support.google.com/business/answer/3474050?hl=en
Tusaalaha Kajawaabida Dib U Eegista Macaamiisha
Kordhinta Mashiinka Raadinta Qalabka waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad sameyn kartid si aad u keento macaamiil badan. Haddii ganacsigaagu uusan ku jirin bogga koowaad ee Google macaamiishaas waxay aadayaan kuwa kula tartamaya.
Isenselogic.com waxaa iska leh David Meshach oo ah injineer keydka keydka hore ee Microsoft iyo milkiilaha dawada marijuana. Waan ognahay sida ay u adagtahay in loogu tartamo suuqa marijuana ee madadaalada iyo caafimaadka. Adoo hubinaya in boggaaga internetka uusan ka jirin wax qalad ah oo si sax ah loo hagaajiyay waxaad ku boodaysaa tartankaaga.
Nala soo xiriir maanta for a BILAASH SEO boggaaga hadda jira ama aad uga jawaabto wixii su'aalo ah ee aad ka qabto boggaaga.
Riix Halkan inaad buuxiso Foomkeena Xiriirka
Category: blogBy koodhadhka July 3, 2017 3 Comments
Tags: Dhiirrigelinta Mashiinka Raadinta QubinMarijuana SEO
Previouspost Previous:Waa imisa qiimaha Leafly & Weedmaps si loogu Xayeysiiyo 2019?Nextpost Next:8 siyaabood oo shaqaalahaagu uga caawin karo ganacsigaaga inuu dakhli badan ka helo SEO
seo tasho wuxuu leeyahay,
Waan ku riyaaqay qoraalkan blog-ka ah! Waxaan dib u eegay bartaada blog si cadaalad ah
sida caadiga ah iyo sidoo kale inaad si joogto ah ula soo baxdid waxyaabo naxdin leh.
Waxaan tan ku wadaagay barteyda Facebook-ga oo loogu talagay dawooyinka xashiishadda madaddaalada iyo waliba taageerayaashaydu way jeclaayeen
waa! Joogtee shaqada wanaagsan 🙂
DonaldCit wuxuu leeyahay,
Habka ka kasbashada isticmaalka marijuana-yada madaddaalada iyadoo la adeegsanayo habeynta mashiinka raadinta
Kaliya 30 maalmood kadib, weli waa inaan isjiidhaa si aan u hubiyaa inaanan riyoon.
Waxaan ku kasbaday tobanaan kun oo doolar bil kasta aniga afar darbi oo aniga ii gaar ah.
Faa’iidada ayaa kororta oo koraysa oo koraysa!
Kaliya waxay qaadataa dhowr daqiiqo
Iyada oo kaliya qasabno yar, waxaad soo saari kartaa $ 15,000 maalin kasta inta noloshaada ka hartay
Raaxada dhulka CBD wuxuu leeyahay,
August 8, 2020 at 12: am 11
Naqshadeynta websaydhada maaddada Weyn iyo SEO.